Qorshe halis ah oo Kenya ka damacsantahay Somalia oo la ogaaday - shumis.net
→ Qorshe halis ah oo Kenya ka damacsantahay Somalia oo la ogaaday
Qorshe halis ah oo Kenya ka damacsantahay Somalia oo la ogaaday
Dowlada Kenya ayaa su’aal ka keentay weerarada ciidamadeeda ay kala kulmaan Maleeshiyada Al-shabaab si gurmad la’aanta ka heysata dhanka Ciidamada kale ee ka tirsan AMISOM kuna sugan deegaanada maamulka Jubbaland.
Dowladu waxa ay sheegtay in xiliyada ay xaaladu tahay mid cakiran ay gurmad u kala dirto ciidamadeeda ku sugan magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xiran, waxa ayna taasi ku micneysay in AMISOM ay dooneyso in kaliya la baabi’iyo ciidamada Kenya laguna fiirsado dagaalka ay kula jirto maleeshiyada Al-shabaab.
Guddoomiyaha Guddiga Siyaasadda iyo Difaaca ee Barlamaanka Kenya ayaa sheegay in Dowlada Kenya ay ka fiirsaneyso kasii mid ahaanshiyaha Taliska AMISOM iyo inay ka madax-banaanaan doonto xiliyada soo socda, waxa uuna Guddoomiyuhu dhaliilay gurmadla’aanta ciidamada Kenya ka heysta dhanka AMISOM.
Arrintan ayaa la rumeysan yahay in looga gol lee yahay in Kenya ay kusoo dheereysato xasuuqa ay ka waddo Soomaaliya, si aysan Amisom ula xisaabtamin.
Haddalka Guddoomiyaha Guddiga Siyaasadda iyo Difaaca ee Barlamaanka Kenya ayaa imaanaya iyadoo maleeshiyada Al-shabaab ay xasuuq ba’an deegaanka Ceel-cadde ugu geysatay Ciidamada Kenya.